အမှတ် 55, အမှတ်နှစ်ခုလမ်း, Longtan mountain.Beilun ခရိုင်, Ningbo
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-13967806388
E-mail ကို: xxh@nbyongxun.com
As you may know, we are still in the Spring Festival and it is by all accounts tragically somewhat longer one this time. You presumably got notification from the news effectively about the most recent advancement of the novel coronavirus pneumonia in Wuhan. The entire nation is taking on against ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Our company has developed new products. The materials are made of PP and cardboard. The products are environmentally friendly and recyclable, bringing office greening. Friends who are interested in the product can understand and discuss, and you are welcome to visit. ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: နိုဝင်ဘာ-28-2018
Ltd. , Ningbo Beilun Yongxu ပလတ်စတစ်စက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပလပ်စတစ် PP ရုံးစာရေးကိရိယာ, ကျောင်းသားစာရေးကိရိယာ, ဆုကြေးဇူးကိုထုပ်ပိုး, PP စာရွက်များ, ရုံးယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးထုတ်ကုန်များတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Beilun ခရိုင်, Ningbo စီးတီး, ပူးတွဲနဲ့အတူလှပတဲ့ကမ်းရိုးတန်းမြို့တည်ရှိသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »